नेकपा विवाद फेरी बल्झियो, सोचे झैँ एकता रैन छ ! – Sodhpatra
नेकपा विवाद फेरी बल्झियो, सोचे झैँ एकता रैन छ !
प्रकाशित : १७ कार्तिक २०७७, सोमबार ०८:५३ November 2, 2020
काठमाडौँ: सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद फेरी बल्झिएको छ । यस अघि विवाद मिलेको भनिएको भएपनि गत शनिबार दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भेटघाट र त्यसपछि भएका भनिएका टेलिफोन संवाद सकरात्मक नभएको चर्चा अहिले भइरहेको छ ।
उनले राजनीतिक स्थायीत्व सुनिश्चित गर्ने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाँक्षा पूरा गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ नेकपा ९एमाले० र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता सम्पन्न भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा गठन भएको बताउदै अहिलेसम्म आईपुग्दा पनि पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको मात्र होइन, पार्टीको एकीकृत तथा अविभाज्य अस्तित्वमाथि समेत बारम्बार प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ब्यक्तिवाद,अहंकार, आवेग र आक्रोशले समाधान दिदैन र कसैको हित गर्दैन । देश,जनता ,श्रमजीवी बर्ग र पार्टी तथा आन्दोलन लाई केन्द्रमा राखेर सोचौं र सकारात्मक निष्कर्ष निकालौं । जान वा अन्जानमा देशी र बिदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरुको चाहाना पुरा गर्ने कार्य कसैबाट हुन नजाओस् ,सबैले समयमै सोचौ ।
केहि महिना अगाडी आएको एउटा चर्चित गीतको प्रसंग अहिले नेकपाको अवस्थाको बारेमा ठ्याक्कै मिल्छ ‘सोचे झैँ जिन्दगी रैन छ’, अहिले नेकपाको अवस्थाले सोचे झैँ एकता रैन छ। भन्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा नेकपाका दुवै अध्यक्ष पार्टी फुटाउने निर्णयमा पुग्लान नपुग्लान त्यो त समयले बताउला तर अहिले पार्टी एकता र सरकार संचालन सोचे जस्तो नभएको महसुस भएको भने पक्कै हो । -खरीबोट बाट